Bit By Bit - Ubunzima intsebenziswano - 5.2 ebalayo Human
Iiprojekthi intelekelelo Human kuthatha yingxaki enkulu; kuyiqhekeza wayityatya elula; uzithumele abasebenzi ezininzi; uze aggregate iziphumo.
iiprojekthi kubalwa Human ukudibanisa imigudu yabantu abaninzi abasebenza elula micro-imisebenzi ukuze bacombulule iingxaki wayentswempu elikhulu umntu omnye. Mhlawumbi unengxaki yophando esifanelekileyo intelekelelo ngabantu ukuba ukhe ucinge: ndikwazi ukusombulula le ngxaki ukuba aba liwaka abancedisi yophando.
Umzekelo prototypical yeprojekthi intelekelelo lomntu Galaxy Zoo, apho ndiza ukuchaza ngokweenkcukacha ngezantsi. Kule projekthi, amavolontiya angaphezu kwama-100,000 ihlelwa imifanekiso malunga 1.000.000 iminyele ngokuchanileyo efanayo ngaphambili-kwaye kakhulu-iinzame ezincinane yi ngeenkwenkwezi yobungcali. Le isikali inyuke ezinikwa intsebenziswano ubunzima kukhokelela izinto ezintsha malunga nendlela enza iminyele, yaye wajika udidi olutsha ngokupheleleyo iminyele ngokuba "ERTYISI Green."
Nangona Galaxy Zoo kunokubonakala kude uphando lwentlalo, kukho iimeko okunene ezininzi apho abaphandi zentlalo ufuna ikhowudi, ukuhlela, okanye imifanekiso ileyibhile okanye iitekisi. Kwezinye iimeko, olu ucazululo kunokwenziwa iikhompyutha, kodwa kusekho iintlobo ezithile uhlalutyo ukuba kunzima neekhompyutha kodwa lula ebantwini. Ke aba bantu lula-for-noko nzima-for-iikhompyutha micro-imisebenzi sinako Tyhila iphepha kwiiprojekthi intelekelelo kwabantu.
yi Micro-msebenzi Galaxy Zoo kakhulu ngokubanzi kuphela, ubume projekthi ngokubanzi ngokunjalo. Galaxy Zoo, nezinye iiprojekthi intelekelelo babantu, sebenzisa gqiphu-isicelo-ukudibanisa qhinga (Wickham 2011) , kwaye xa uziqonda esi sicwangciso uya kuba nako ukusebenzisa ngayo ukusombulula ezininzi iingxaki. Okokuqala, ingxaki enkulu lahlulelene laba amaqashiso we mapu elincinane ngxaki. Emva koko, umsebenzi womntu lisetyenziswa kweziqulathi ngamnye ingxaki encinane, elizimeleyo ezinye izigaqa. Okokugqibela, iziphumo kulo msebenzi zidityanisiwe ukuvelisa isisombululo imvumelwano. Ngenxa imvelaphi ukuba, makhe sibone indlela isicwangciso split-isicelo-ukudibanisa eyasetyenziswa kwi Galaxy Zoo.